जनकपुर, २८ असार-निर्वाचन आयोगले समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई दल दर्ता प्रमाण पत्र दिएपछि औपचारिक रुपले दुई दल एक बनेका छन् ।
दुबै दल एक भएपछि आफूले एकता गराएको भनेर श्रेय लिने कार्य पनि सुरु भएको छ । श्रेयका लागि जसपा नेता राजेन्द्र महतोका निकटस्थहरु अगाडि देखिएका छन् ।
नेता महतोका ज्वाई अनिल महासेठले समाजिक सञ्जालमा महतोलाई श्रय दिई धन्यवाद पनि दिएका छन् । राजपामा केन्द्रीय सदस्य रहिसकेका महासेठ अहिले प्रदेश–२ का सभामुखका सल्लाहकार छन् । राजनीतिक कार्यक्रममा जहिलेपनि उनी महतोसँग देखा पर्ने गर्छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘सुरु देखि लागेर पार्टी एकीकरणका लागि आफ्नो पद र नम्बरको परवाह नगरी यो मिसनलाई सफल बनाउनु भएका हाम्रा वरिस्ठ नेता राजेन्द्र महतो ज्युलाई बिशेश धन्यवाद ! आगामी दिनमा सबैलाई समेटेर पार्टी एकीकरणका बाँकी काममा सबैको साथ र सहयोग रहने नै छ ।’
‘आजदेखि जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सदस्य ! नेपालमा वैकल्पिक शक्ति को आवस्यकताक छ । यसका लागि तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ लाग्नु भएका सबै लाई धन्यवाद छ,’ उनले लेखेका छन् ।
उनीजस्तै अन्य कतिपय नेताहरु आफ्नो त्यागका कारण पार्टी एकता सम्भव भएको बताउँदै आएका छन् ।
जसपाले दल दर्ताका लागि गत ११ वैशाखमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
गालीगलौजमा उत्रिदा भारतसँग वार्ताको वातावरण बन्न सकेन : नेता पौडेल